“waxaan ogahay in la maandooriyey aabahey maadama uu yahay nin aan la lodi karin”
Waxaa isku soo duwdey;
Iinkastoo xaaladda guud ee madaxweynihii hore dalka Ciraaq ay tahay mid aan la saadaalin karin sida ay ku dambeyneyso ayaa hadana waxaa jira dad badan oo rajo ka qaba in si cadaalad ah xukunkiisa u dhaco haddiiba ay dhacdo in la horkeeno maxkamad caadil ah. Hase ahaatee waxaa shaki ka taagan yahay sida ay yeeli doonaan awoodda reer Galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Ingiriiska oo iminka gacanta ugu jira madaxweynihii Ciraaq ee ay afgembiga kaga tuureen xukunkiisii muddada dheer ka talinaayey dalkaasi.
Hadaba haweeneyda qareenada ah ee la yiraahdo Bushra Al- khaliil oo u dhalatay dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday iney u istaageyso siddii ay u difaaci laheyd madaxweyne Saddaam Xuseen.
Bushra oo ka hadleysay sababta u dooratay iney difaacdo Saddaam Xuseen oo ahaa ninkii loogu baadi goob badnaa dalka Ciraaq iyo guud ahaan waxa loogu yeero argagaxisada ayaa sheegtay iney u heyso abaal ah siddii uu ugu dhii dhiyey mar uun inuu u gacan galo cadowga Israa’iil iyo Mareykanka, islamarkaasina uu yahay ninkii ka dambeyey iney abuurmaan xoogaga iska caabin ah ee ka soo horjeesta gumeystaha qorsoon ee casrigan.
Qaraneedan ayaa maanta waxaa lugu wadaa iney u dirto warqad Saddaam Xuseen oo ay kaga codsaneyso inuu aqbalo codsigeeda, waxaana ay carabka ku dhiftay ineysan keligeed aheyn qareenada doonaya iney u doodaan Saddaam Xuseen ee ay ka kala yimaadeen dalalka Jordan, Suuriya Lubaan iyo qaar kale oo kamid ah dalalka Carabta.
“Waxaan u maleynayaa in wadadii la marsiin lahaa Saddaam Xuseen ay mar hore jeexeen Mareykanka iyo xulafadiisa” ayey tiri Bushra oo dhinacna ka muujineysa sida ay u adkaan karto in Saddaam Xuseen difaacaan qareenada carbeed.
Bushara oo ah qareenada isku taagtay iney Saddaam Xuseen difaacdo ayaa warqad ay maanta qortay waxaa ay u gudbisay Urruruka caalamiga ah ee Laan qeyrta cas ee ay ku leedahay xarun magaalada Beyruut ee dalkaasi Lubaan.
Hadaba warqadii oo af carabi iyo ingiriisiba ku qorneyd ayaan idiin soo tarjunay waxaana Bushra ku bilwday hadalkeedii sidatan:
“Mudane madaxweyne Saddaam Xuseen, waxaan Illaahey kaaga baryayaa inuu ku siiyo nabadgalyo iyo caafimaad, islamarkaasina uu amuurahaaga ku fududeeyo.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Ciraaq Saddaam Xuseen iyo geesiga carbeed ee mujaahinta ah. Nabadgalyo korkaaga ahaato!.
Markii aan ka arkay telefeyshinka sawirkaaga iyo sida aad gacanta ugu jirto kuwa dulmiga wada, waxaan dareemay inaad tahay ninka keliya ee carbeed ee xorta ah, siddoo kale shacuubta carbeed intooda damiirka leh sidaas ayey dareemeen.
Waxaan kaa codsanayaa inaad ii ogolaato inaan ahaado qareenkaaga oo aan kuu doodo, haddii aad i ogolaatana waxaan taasi ku tilmaamaya iney noqoto ”maxkamad caadil ah”
Waxaan kuu hayaa ixtraam badan oo aan la soo koobi karin.
Qareenadda:Bushra Al- khaliil
Fiiro gaar ah: Waxaan hadalada qaar u isticmaalay anigoo raacay sida ay diinteena nabartay suubanaheenii Muxamedna NNKH laga bartay oo culimadu tilmaamtay.
Dhinaca kale gabdhihii uu dhalay Saddaam Xuseen ayaa wareysi ay siiyee telefeyshinka Al- carabiya ku sheegeen in aabahoo la qaafiyey oo qabsashadiisii loo isticmaalay in la maandooriyo, waxaana ay xuseen in aabahoo uu ahaa nin adag oo aan sahal lugu loodin karin.”Waxa uu ahaa aabe fiican oo jecel wiilashiisii iyo gabdhihisii iyo carruurta ay dhaleen isagoo lahaa qalbi fiican” ayey Raqda oo indhaheeda ilmo ka dareereysay, islamarkaasina ka xun sida jees jeeska leh loo qabtay caalamkana lugu baahiyey sawiradii ay damiirka diideen ee qabsadashii Saddaam Xuseen.
”Maxkamad caadil ah oo dalka dibiisa la horkeena aabaheen ayaa codsaneynaa” ayey tiri Rana oo kamid aheyd gabdhihii Saddaam oo rajo weyn ka qabta in aabahood la horkeeno sharci caddaalad ah haddii ay soo baxaan dembiyada lugu soo oogay.
Labadan gabdhood ee walaalaha ah oo raggoodii lugu eedeynayo dilkooda inuu ka dambeeyo aabahood ayaa waqtigan xaadirka ah waxaa ay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin iney garabkiisa istaagaan. ”qasbashaddii aabahey oo u muuqday geesigii carbeed ee aan la loodin karin, ayey maanta guud ahaan dunida carabta iyo islaamkaba ku tahay ceeb” ayey tiri Raqda oo wareysi ay siisay wargeyska Alquds – Alcarabi, kana codsatay dadka Ciraaqiinta ah iyo dunida muslinkaba iney la dirriraan ”Gumeystaha cusub ee casriga”
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 17, 2003